टिक-टकमा भाईरल गायिका पुजा देवकोटा मिडियामा, हेर्नुस १३ बर्षकी पुजाको जादुमय स्वर (भिडियो सहित ) -
Home News टिक-टकमा भाईरल गायिका पुजा देवकोटा मिडियामा, हेर्नुस १३ बर्षकी पुजाको जादुमय स्वर...
टिक-टकमा भाईरल गायिका पुजा देवकोटा मिडियामा, हेर्नुस १३ बर्षकी पुजाको जादुमय स्वर (भिडियो सहित )
पछिल्ले समय टिकटकमा एक लाईभ दोहोरीका बिभिन्न टुक्काहरु भाईरल छन् । मानसिंह खड्का युटुब च्यानलबाट आएको चोली मैल्यै भो गीतमा गाईएको उक्त लाईभ दोहोरीबाट बाल गायिका पुजा देवकोटाका टुक्काहरु टिकटकटकमा सबैले रुचाए ।
यसैबिच पुजा मिडियामा आईन् । आफ्नो गीतमा चलेका कलाकारहरुले टिकटक बनाउँदा उनी खुशी छिन् । पछिल्ले समय सारेगमप रियालिटी शोबाट बाहिरिएकी पुजा कुनै समय आफ्नो बुवा खोज्दै काठमाडौं आएकी थिइन् ।
भाईरल बाल गायिका पुजा देवकोटाका बुवा घर फर्किए । करिव पाँच बर्षदेखि सम्पर्क बिहिन भएका पुजाका बुवा विश्वभरि कोरोनाको प्रकोप चलिरहेका बेला घर आए । लम्कि मल्टिपल क्यापसमा १४ दिन करेन्टाईनमा बसेर हिजो मात्रै पुजाका बुवा घर आईपुगे ।
यति बर्ष सम्म कहाँ हराउनु भएको थियो ? के यी साना नानि बाबुको माया लागेन ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले माया लाग्थ्यो तर लागेर के गर्नु म संग मोबाइल पनि थिएन र नजिकै कोहि नेपालिहरु पनि नभएका कारण घरमा सम्पर्क हुन सकेन उनले भने । पुजाको घर पनि बन्यो । यतिबेला उनी काठमाडौंमा बसेर पढिरहेकी छिन् । शिशिर भण्डारीसँग उनले यसरी दुख सुखका कुराहरु साटिन् ।
Previous article८ महिनाको गर्व बोकेकी युवती यसरी हाम्फालेर ज्या न फालिन्,घरमा सासु र श्रीमान यसो भन्दैछिन् (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleबखत को प्रेमिका भनिने किरण मिडिया मा आएर खोल्यो एस्तो कुरा